बाख्रीले पनि न्याय पाइन् :: Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Audio, Video, Nepali Model, Actor, Actores, Interview
बाख्रीले पनि न्याय पाइन् १३ माघ, काठमाण्डौं । बाँच्नलाई घास खानु बाख्रीको अधिकार हो । भोको पेट भर्ने क्रममा उसले घासको साथ संयोगबश फूल खाइदिइन् भने यसलाई ठूलो अपराध मानिन्न होला । तर, अस्ट्रेलियामा एक निर्दोष बाख्रीलाई फूल खाएको अभियोगमा जरिवाना गरियो ।
यो प्रकरणमा बाख्रा र उसको साहुमाथि विधिवत् अदालतमा मुद्दा चल्यो । अन्ततः अदालतले बाख्रालाई निर्दोष ठहर गर्दै जरिवाना खारेज गर्‍यो । मेट्रो युकेका अनुसार सिड्नीको संग्रहालयमा छिरेर बाख्रीले घाससँग सुन्दर फूल पनि चर्न पुगेकी थिइन् । संग्रहालयको सौन्दर्य बढाउन ती फूलहरुको विशेष योगदान हुन्छ ।
बाख्रीका कारणले संग्रहालय कुरुप देखिएकोमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरु निकै निसाए । उनीहरुले बाख्री र उनको मालिक जेम्स डेजोर्डनोल्डसमाथि पनि जरिवाना लगाए । जेम्सले लापरबाही गरेको भन्दै प्रहरीले ४ सय ४० डलर जरिवाना गरेको थियो । उनी अस्ट्रेलियाको ठूलो हास्य कलाकार पनि हुन् ।
यो अन्याय विरुद्ध जेम्सले अदालतमा गुहारे । कुनै षडयन्त्र वा पूर्व योजना अनुरुप बाख्रीले फूल नखाएको भन्दै अदालतको मिजस्ट्रेटले जेम्समाथि लगाएको जरिवाना खारेज गरेको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । न्यायाधीश क्यारोलिन बार्केलले बाख्रीलाई फूलको मूल्य थाहा नभएको बताइन् । खाने लोभमा फूललाई चपाएर बाख्रीले पहाड उल्टिने गरी अपराध नगरेको पनि उनले बताइन् ।
One Comment on “बाख्रीले पनि न्याय पाइन्”
kumar wrote on 26 January, 2013, 3:40
Yo nc kanatak kar haru nautagi kati janeka hun
नेपालमा थप चार विदेशी वायुसेवाले उडान भर्ने
बिहे गर्न हलो जोत्नै पर्ने ?
पतिलाई अस्वीकार गरी देवरसँग विवाह !
नक्कली र टुरिस्ट भिसामा पनि श्रम स्वीकृति, लेबनान लगिएका महिला कामदार दुबर्इमा
बिरामीको अश्लील भिडियो खिचेर बिहे गर्न डाक्टरको दबाब !
अक्षर सुधार्न थाले वीरका डाक्टरले
चुनावको जतिसक्यो छिटो तोक्नु पर्छ : थापा
शिक्षक परीक्षाको नतिजा कात्तिकसम्म आउने
बर्षाले सडक बगाएपछि पुर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध